I-Thematic nuclei emsebenzini kaCésar Vallejo | Izincwadi Zamanje
Njengabo bonke ababhali, César Vallejo kwadingeka uchungechunge lwe ukuthatheka eziphindaphindwa ngezikhathi ezithile kuwo wonke umsebenzi wakhe ziveza izingqikithi ezifanayo zazo esizifingqa kafushane kule ndatshana.
Enye yazo umuzwa wokubona kungavikelekile futhi kuphela ezweni eligcwele ukungabi nabulungisa nobubi obuhlupha isintu futhi kusongele abantu kuzo zonke izingxenye. Akekho, ngisho noNkulunkulu, ozosiza abesilisa nabesifazane ukuthi baphume emthonjeni wesizungu nokungabi namandla okuzisiza abacwile kuzo.
Ukudlula kwe- isikhathi kungenye yezinto azithandayo. Ukusondela ekufeni, okusondele futhi okusondele ngenxa yokugeleza kwekhalenda, kuyayihlukumeza imbongi ephephela emvelweni nasemzimbeni wayo njengendlela yokuphila manje ngaphandle komthwalo wesikhashana wokukitazwa kwaphakade iwashi. Kodwa-ke, ukuguga nakho kuzwakala ngezinzwa ...
Ekugcineni i- ukulungiswa futhi ubumbano kungezinye zezinto ezibalulekile zomsebenzi kaVallejo, owazi ukuthi iqiniso limnyama nokuthi ngokusiza abanye nokwabelana ngezinhlungu zabo kuphela lapho ezokwazi ukwenza okuthile ukudambisa isimo esibuhlungu esiphila kuso abantu.
Imininingwane engaphezulu - Umlando kaCésar Vallejo
Isithombe - I-Peru 21
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Abalobi » Izingqikithi eziphindayo ku-César Vallejo